Buugga Michael Cohen: Trump waa "khaa'in, beenaale ah, dadkana u xoogsheegta, cunsuri
Thursday September 10, 2020 - 00:21:59 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Donald Trump wuxuu u dhaqmaa sida "nin burcad ah"
Donald Trump wuxuu u dhaqmaa sida "nin burcad ah" , wuxuuna leeyahay "aragti gaaban oo ku saabsan dhammaan dadka madowga ahi”, sidaasi waxaa yiri qareenkii hore ee madaxweynaha Mareykanka Michael Cohen.Eedeymahani ayaa lagu qoray buug cusub oo uu qoray Michael Cohen oo lagu magacaabo Disloyal: A Memoir, wuxuuna qoray muddadii uu xabsiga ku jiray. Cohen ayaa loo xiray sababo la xiriira khaladaad dhaqaale oo dhacay xilligii ololihii doorashadii 2016-kii ee Donald Trump uu ku guuleystay iyo dambiyo kale.
Aqalka Cad ee Mareykanka looga arrimoyo ayaa sheegaya in Cohen uu arrintaasi ka been sheegay.
"Cohen waa garyaqaan dambiile iyo sharaf laawe ah oo been u sheegay aqalka Congress-ka,” ayay tiri, Kayleigh McEnany, oo ah xoghayaha warfaafinta Aqalka Cad.
"Wuxuu lumiyay dhammaan kalsoonidii lagu qabay, mana ahan wax lala yaabo in uu shaaciyo isku daygiisii ugu dambeeyay ee uu ku faafinayo beentiisa.”
Cohen ayaa buugiisa ku sheegay in madaxweyne Trump uu isna galay "isla dambiyadii” uu isaga ku muteystay xabsiga, wuxuuna Trump ku tilmaamay "khaa’in, beenaale, nin dadka u xoogsheegta, cunsuri, ugaarsade”. Wuxuuna sheegay in Trump uu u fikiro sida "hoggaamiyaha koox burcad ah”.
Wargeysyada kala duwan ee dalkaasi Mareykanka ayaa daabacay xigashooyin ka mid ah buuggani oo soo baxay shalay oo Talaada ahayd. Haddaba waxaan halkan ku soo koobeynaa shakhsiyaadka la sheegay in Trump uu u gafay.
"Sida caadiga ah, Trump wuxuu muujiyey aragtidiisa gaaban ee ku aadan dhammaan dadka madowga ah, muusiggooda, dhaqankooga iyo xitaa siyaasaddooda,” ayuu Cohen ku qoray buugiisa.
Wuxuu sheegay in Donald Trump uu madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika isla markaana ahaa nin u dhaq-dhaqaaqii jiray ladagaallanka midab takoorka, Nelson Mandela, uusan "ahayn hoggaamiye”.
Sida uu sheegay Cohen, madaxweyne Trump ayaa laga hayaa in uu yiri "ii sheeg hal waddan oo uu maamulo qof madow ah oo aan ahayn "meel aad u xun”. Dhammaantood waa meelo wasakh ah”.
Erayadaas ayaa la mid ah kuwo sannadkii 2018-kii lagu eedeeyay Trump. Waxaa xilligaas la sheegay in Trump uu dhammaan waddamada qaaradda Afrika ku tilmaamay "shithole” oo ah erey aflagaado ah oo lagu micnayn karayo "wax aad u xun”.
Xilligaasi wuxuu madaxweyne Trump sheegay in isagu uusan ahayn cunsuri, sidaa awgeedna uu yahay "qofka ugu cunsuriyadda yar ee abid la wareysto”.
"Ma rumaysan karayno in hoggaamiyeyaasha u dhaqmaya sida Trump oo kale ay faallo xeel-dheer ka bixin karaan nolosha iyo shaqadii uu soo qabtay Madiba,” ayay hay’addaasi ku tiri bayaan ay soo saartay.
"Madiba oo mar ka hadlayay hoggaamiyenimada waxa uu yiri: ‘Hoggaamiyaha wanaagsan wuxuu si hufan oo dhameystiran kaga qeyb geli karaa dood, isagoo og in ugu dambeyntii isaga iyo dhinaca kale ee ay dooddu u dhaxeyso ay tahay in ay isku soo dhowaadaan, sidaasna ay awood ku yeeshaan. Xigmaddaasi ma lihid haddii aad tahay qof jaahil ah oo aan xog-ogaal ahayn’. "Waxaan kula talin lahayn Trump in uu tixgeliyo xigmaddaasi.”
"Trump wuxuu soo kireystay wax loo soo ekeysiiyay Obama oo lagu soo bandhigay muuqaal uu si cunsurinimo ah ku liidayay madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka ee madowga ahaa,” ayuu ku qoray Cohen buugiisa.
Sida uu Cohen ku qoray buuggiisa, Trump ayaa laga soo xigtay in uu yiri: "Waligey ma helayo codadka dadka ku hadlo luuqadda isbaanish-ka. Sida kuwa madowga ah oo kale, waxay la tahay in ay doqonnimo tahay in Trump ay u codeeyaan. Mana aha dad aad u badan.”
Donald Trump wuxuu aad ugu bogay madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin, sababtoo ah wuxuu awooday "in uu la wareego waddan dhan iyo ummaddiisa isla markaana uu u maamulo sida shirkad ganacsi oo si gaar ah uu isaga u leeyahay – sida shirkadda Trump oo kale,” ayuu Cohen ku qoray buuggiisa.
Haseyeeshee, Cohen wuxuu sidoo kale sheegayaa in ololahii doorashada ee Trump uu ahaa "mid aad u qasan oo aan karti u lahayn in uu dhab ahaantii la shaqeeyo dowladda Ruushka,” markii uu Trump xukunka la wareegay.
"Waligey lacag kuma bixin waxyaabahan oo kale balse dad badan iyo saaxibbo badan ayaa igula taliyay in aan lacagtaasi bixiyo,” ayuu yiri Trump sida lagu seegay buugga cusub ee Cohen.
Trump ayaa Cohen ku tilmaamay "doolli ama jiir” iyo waliba beenaale.